पोहरसाल घर अगाडीे ठूलो ध्वनीको मायकिङ्गले मेरो ध्यान खिंच्यो । तल झरेर हेरें, सफाई अभियानका झण्डा बोकेका किशोर, किशोरीहरु, महिला, पुरुषहरु, केहि दर्जन प्रहरीहरु, क्यामेराम्यानहरु, कुचो, बोरा, सावेल, मोबाईल बोकेका दर्जनौं मानिसहरु सफाई आन्दोलनमा जुटेका रहेछन् । करीब एक घण्टा जतिको सफाई अभियान पछि उदघोषकले माईकबाट सवै अतिथी र सहभागिहरुलाई पहिलेदेखि बाटोको छेउ सजाईएको पालमुनीको मेचहरुमा आसन ग्रहणको लागि निमन्त्रणा गरे । विभिन्न व्यक्तिहरुबाट करीब डेढ घण्टा जतिको भाषण र चियापान पछि कार्यक्रम समापनको घोषणा भयो । सहभागिहरुले फोटो र सल्फि खिचे र रमाए । त्यस कार्यक्रम पश्चात उक्त सफाई टोली पुनः त्यहाँ देखा परेको छैन । त्यो ठाउँमा फोहोरको थुप्रो उस्ताको उस्तै रहेकोछ । मेरो घरको वरिपरि भने केहि फरक परम्पराछ । फोहर उठाउनको लागि माइकिङ्क, भाषण, चियापान कहिल्यै गर्नु परेन । घरको अगाडी कपूर लगायतका केहि बोटहरु रोपेकाछौं । सरकारले चक्रपथ बनाउँदा बखतको रुख पिपलको बोटलाई छाँटेर ढल्नबाट जोगाएकाछौं । रुखले छोडको भुईँमा दुवो लगाई चारैतिर तारबार र सदावहार विरुवाहरु लगाएकाछौं । घरको पर्खाल बाहिर पनि अजू स्वाँ, हरिया बोटहरु र दुवो लगाएकाछौं । त्यो क्षेत्रमा हामी हरेक दिन बढाछौं र झार सफा गछौं । यो ठाउँले गर्मी महिनामा बटुवाहरुलाई केहि राहत दिएको देख्छौं र खुशी हुन्छौं । वटुवाहरु उकछिन छहारीमा आराम गर्छन् र बाटो लाग्छन् । किशोर किशोरीहरु त्यो क्षेत्रमा विभिन्न पोजमा सेल्फि लिन्छन् । पे्रमी पे्रमिकाहरु शितलमा घण्टौं गफिन्छन् ।
हामीले सफा गरेको देखेर बाटोमा हिड्ने कोहि कोहि वटुवाहरु अनेक कुरा गरेर हामीलाई हैरान पार्छन् । उनीहरु हाम्रो काममा टिप्पणी गर्छनन् । उनीहरु भन्छन् रुख पात झरेर दुःख दियो । यसलाई काटेर फाल्नुस । सडक सफा गरेर पनि साध्य लाग्छ र फेरि फोहर भैहाल्छ नि । तपाईले पनि सफा गर्ने ? अरु मान्छ छैन ? नगरपालिकाले सफा गरि हाल्छ नि तपाईले किन सफा गर्ने ? आदि आदि । कोहि वटुवाहरु यस्ता पनि छन् केरा, चाउचाउ, पान पराग, चकलेट आदि खाएर बोक्रा त्यहिँ फाल्छन् । उनीहरु सफा गरेको एक छिन मै डुँगुर फोहर बनाएर गई हाल्छन् । कोहि कोहि गाडीवालाहरु यस्ताछन्, गाडी रोक्छन्, छेकेर दिशा पिसाव गर्छन्, गाडीको फोहर समेत फालेर हिड्छन् ।
खुशीको कुरा मान्नु पर्दछ कि हरियाली र सफाईको कामको सिको टोलका अरु घरले पनि गर्न थालेकाछन् । यसले सिङ्गै टोल सफा र घरहरुलाई शितल बनाएकोछ । घरमा गर्मी महिनामा पनि विद्द्युतीय पंखाको जरुरत परेको छैन । शितल हावाले शान्तिको महशुस गराउँछ ।
आज २२ अप्रिल ‘अन्तराष्ट्रिय पृथ्वी आमा’ दिवस हो । शायद यसपाली पनि मानिसहरुले धेरै थरिका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछन् र करोडौं रुपैया व्यर्थैमा खर्च गर्नेछन् । पृथ्वीलाई माया गर्ने धेरै तरिकाहरु छन् त्यसलाई हाम्रो दैनिक जीवनको कार्य तालिका भित्र समावेश गर्नु पर्दछ । तर पनि चुनौतीपूर्ण भने पक्कैछ । सवैभन्दा ठूलो चुनौती हाम्रो मानसिक विकृति नै हो । नेपाललाई ‘नेपाल आमा’ पृथ्वीलाई ‘धर्ती आमा’ भन्ने गरेता पनि मानिसहरुको सफाई र श्वास्थ्यको भावना आप्mनो कोठा, आप्mनै घर भन्दा बाहिर आउन नसकेका कैयौं उदाहरणहरु छन् । केहि उदाहरणहरु भनौं न धेरै दाजुभाई एउटै घरमा बसेका छन् भने घरको कोठा कोठा सफा हु्न्छ, घरको आँगन, भर्याँग, घरको साझा भनिएका ठाउँहरु सफा भएको देखिँदैन । एउटै घरमा एउटै परिवार बसेकोछ भने घरको आँगन, घरको मोहडाले ओगटेका बाटो सफा गरेको हुँदैन । त्यो गर्नको लागि घरधनीहरुले अरु कोहि अभियन्ता वा सरकारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । उनीहरु बरु दोबाटो, चौबाटो, चिया पसलहरुमा घण्टौं सम्म नेता, पार्टी आदिको गाली गर्दै समय बर्वाद गरिरहेका हुन्छ । महिलाहरुको हकमा बुहारी, सासु, आमाजु, नन्दहरुको कुरा काटेर समय विताउने चलन अद्यावधि छँदैछ । चरम मानसिक विकृतिको अर्को उदाहरण के हो भने नेपालमा कुनै सांसद या नेताका परिवारले, केहि पढेलेखेकाले, माथिल्लो तहका कर्मचारी र कर्मचारीका परिवार आदिले फोहर सफा गर्ने वा फोहर उठाउने काम गर्दा ईज्जत जान्छ भन्ने वा लाज लाग्नु हो । उनीहरु घरको अगाडी वा टोल छिमेकमा फोहरको डुँगुर थुपारेर साहेब साहेवनीको सलाम ढोग खाएर मख्ख परी बसेका हुन्छन् ।
हिजोआज नेपालमा अष्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका र एशियाका जापान, चिन जस्ता विकसित देशहरु घुमेर अनुभव वटुलेका युवा र अन्य नागरिकहरुका संख्या कमि छैन । उनीहरु मध्ये केहि ती मुलुकहरुका विकास, सभ्यता, सफाई आदि बारेमा घण्टौं कुरा गर्न खप्पिस छन् । साथै उनीहरु नेपाल, नेपाली, नेपाली प्रशासन आदिलाई गाली गर्न, सराप्न पनि उत्तिकै खप्पिस छन् । उनीहरुले अरु मुलुकको जति पूmर्ति लगाए पनि कुराले चिउरा नभिज्ने कुरा सत्य हो । नेपालको लागि सर्वप्रथम नेपाली नै उत्साहित भएर लाग्नुको कुनै विकल्प पनि छैन । भनिन्छ ‘तिमीले अरुबाट केहि कुराको अपेक्षा गर्छौ भने तिमीले त्यो कुरा अरुलाई दिन तयार हुनु पर्दछ । ’ अर्थात हामीले नेपाललाई सुन्दर र सफा वातावरणमा देख्न चाहन्छौं भने नेपाललाई पनि प्रत्येक व्यक्तिे समय, शिप, साधन, श्रोत दिन तयार हुनै पर्दछ । एकैचोटी परिवर्तन हुँदैन, तर हरेक व्यक्तिले गरेको ससानो प्रयास र योगदानले अन्ततः परिणाममा पुग्न सकिन्छ । अष्टे्रलिया वा स्वीटजरलाण्डको सफा र चिल्लो सडकको गफ गरेर नेपालको घर आँगनको सडक सफा हुँदैन । त्यसको लागि त आफैले गर्नै पर्दछ ।
हामीलाई दैनिक जीवनमा सामान्य लाग्ने तर धेरै गम्भीर, घातक र नकारात्मक कुराहरु हामीमा रहेकाछन् । जस्तो हामीले खाएको पानीको प्लास्टिक वोटल, चाउचाउ, पानपराग, सूर्तिको खोल, सु्न्तला, केराका बोक्रा बाटामा जहिँ तहिँ फाल्ने, गाडीमा यात्रा गर्दा बदमको बोक्रा, सुन्तलाको बोक्रा गाडी मै या गाडीको भ्mयालबाट फाल्ने, चउरमा बस्दा वा घाम ताप्दा वदाम, केरा, सुन्तलाका बोक्रा वा जे होस चउर मै थुपार्ने, घाँस चिमोटेर उखेल्ने, सिंगान र खकार प्mयाक्ने, चउरको छेउछाउमा दिशा पिसाव गर्ने वानीछ ।
हिजो आज मैले काठमाडौंमा बाहिरबाट चिटिक्क सजिएका केहि पसलहरुका चर्पिहरु पस्ने मौका पाएँ । मलाई लाग्यो धर्मगन्थले वर्णन गरेको नरक शायद त्यस्तै होला । त्यसतो हुनुको कारण के होला भने घरपेटीको नजरमा भाडामा बस्नेको जिम्मा, भाडामा बस्नेको नजरमा घरभाडा त तिरेकै छौं हामीलाई के को वास्ता? तर त्यो फोहरले नोक्सान त दुवै पक्षलाई गर्छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता बानी व्यहोरालाई हटाउन नसके सम्म धर्ती मेरी आमा भनेर भाषण गरोस या सफाई अभियान भनेर सडक बढार्न हिडोस, त्यसले तात्वीक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । नेपाललाई राम्रो बनाउन के के गर्दा हुन्छ, के के गर्नु हुँदैन, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हरेक व्यक्तिले सूचि र समय तालिका बनाउन र त्यसमा लगनशिलताका साथ लाग्न जरुरीछ । हाम्रो यो पुस्ताले प्रयत्न गरेमा हामी पछिका नयाँ पुस्ताले पनि हाम्रा राम्रा कुराहरुलाई निरन्तर दिने र त्यसलाई विकसित गर्न सक्नेछ । हाम्रो पुस्ताले भन्दा पनि नयाँ पुस्ताले अझै सुन्दर, व्यवस्थित र सभ्य नेपाल देख्न पाउनेछ।